Nebulae: kedu ihe ha bụ, kedu ka esi akpụ ha na ụdị | Network Meteorology
Taa, anyị na-aga n'ihu na edemede ọzọ site na ngalaba a na mbara igwe. Anyị ahụla njirimara na akụkụ nke Usoro anyanwụ na ụfọdụ mbara ala dị ka Mars, Jupita, Ebere, Saturn y Venus. Taa, anyị ga-eleta ndị nebulae. Probably nụla banyere ha, mana ị maghị kpọmkwem ihe ọ bụ. Na nke a, anyị ga-eleba anya na ihe niile metụtara nebulae, site na ihe ọ bụ, otu esi akpụpụta ya na ụdị dị.
Chọrọ ịmụtakwu banyere nebulae na eluigwe na ala anyị? Naanị ị ga-anọgide na-agụ 🙂
1 Kedu ihe bụ nebula?
2 Ofdị nke nebulae
2.1 Ọchịchịrị nebulae
2.2 Gbasaa echiche nebulae
2.4 Nebula dị na mbara ala
2.5 Ntughari uche na umu anwuru
Kedu ihe bụ nebula?
Nebulae, dị ka aha ha na-egosi, bụ igwe ojii buru ibu nke na-ewere ọdịdị dị iche na mbara igwe. Ihe mejuputara ha bu ikuku gas, kariri nke oma, helium na uzuzu kpakpando. Dị ka ị maara, n'ime Eluigwe na Ala ọ bụghị naanị ụyọkọ kpakpando dị ka e chere na ọtụtụ iri afọ gara aga, mana e nwere ọtụtụ nde. Galayọkọ kpakpando anyị bụ Milky Way ọ dịkwa n’akụkụ onye agbata-obi anyị, Andromeda.
Nebulae nwere ike ịchọta ụyọkọ kpakpando ndị na-adịghị agbanwe agbanwe na ndị ọzọ na-achọ. Ha dị ezigbo mkpa na Eluigwe na Ala, ebe ọ bụ na a na-amụ kpakpando n'ime ha site na nchịkọta na nchịkọta nke ihe.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ, na ileba anya mbụ, Ha bụ igwe ojii nke ikuku na uzuzu ọ bụghị nebulae niile bụ otu. Ọzọ anyị ga-enyocha ụdị nebula ọ bụla iji mara ha nke ọma.
Ofdị nke nebulae
Nebula gbara ọchịchịrị abụghị ihe ọzọ karịa igwe ojii nke ikuku oyi na uzuzu nke na-anaghị enye ìhè ọ bụla a na-ahụ anya. Kpakpando ndị dị na ha zoro ezo, ebe ọ bụ na ha anaghị ewepụta ụdị radieshon ọ bụla. Otú ọ dị, ájá sitere na igwe ojii ndị a o nwere dayameta nke otu micron.
Njupụta nke igwe ojii a dị ka ọ bụ nke anwụrụ ọkụ sịga. Umu irighiri ihe ndia gbakotara dika otutu, carbon, ma obu oyibo.
Gbasaa echiche nebulae
Typedị a ihe mejuputara ya bu hydrogen na aja. Anyi na-echeta na hydrogen bụ ihe kachasị ụba n’eluigwe na ụwa. Nebulae nke ntụgharị uche nwere ikike igosipụta ìhè a na-ahụ anya site na kpakpando.
Ntụ ntụ nwere ọdịiche dị na ọ bụ acha anụnụ anụnụ na agba. Nebulae gburugburu Pleiades bụ ezigbo ihe atụ nke ụdị a.
Nke a bụ ụdị ụdị nebula, ha na-ahụ ma na-enye ìhè n'ihi ike ha na-enweta site na kpakpando dị nso. Iji nye ọkụ, atọm atom na-enwe obi ụtọ site na ike ultraviolet dị ike sitere na kpakpando ndị dị nso na ionize. Nke a bụ, Ọ na-efunahụ naanị electron ya iji zipu foto. Ọ bụ omume a na-eme ka amuke na nebula.
Kpakpando nke ụdịdị dị iche iche O nwere ike ionize gas n'ime radius nke afọ 350. Dịka ọmụmaatụ, Swan Nebula ma ọ bụ M17 bụ nebula na-emepụta ihe nke Chéseaux chọtara na 1746 wee chọpụta ya na Messier na 1764. Nebula a na-enwu gbaa ma na-acha pink. Anya na-ahụ anya na anya ọtọ na obere ala.
Mgbe ha na-acha uhie uhie, ọ pụtara na ọtụtụ hydrogen na-arụ ọrụ. Ọ bụ ebe obibi ọtụtụ kpakpando na-eto eto nke amụrụ sitere na ikuku mmanụ. Ọ bụrụ na a hụrụ ya na infrared, enwere ike ịhụ oke ájá maka ihu ọma nke kpakpando.
Ọ bụrụ na anyị abanye na nebula anyị nwere ike ịhụ ụyọkọ mepere emepe nke ihe dị ka kpakpando 30 mejupụtara gas. Dayameta na-adịkarị ihe dị ka afọ iri anọ. Mkpokọta uka na-etolite na nebulae nke ụdị a bụ ihe dịka 800 karịa uka nke Sun.
Ihe omuma doro anya nke nebula a bu M17, nke ọ dị afọ 5500 site na sistemu anyanwụ anyị. M16 na M17 dinara n'otu ogwe aka nke Milky Way (Sagittarius ma obu Sagittarius-Sagittarius-Carina ogwe aka) na ikekwe akuku nke otu ihe mgbagwoju anya nke igwe ojii.
Nebula dị na mbara ala
Nke a bụ ụdị nebula ọzọ. The ajị ajị e jikọtara ha na ọmụmụ nke kpakpando. Na nke a anyị na-ekwu foduru nke kpakpando. Planet Nebula sitere na nchoputa mbu nke emere maka ihe ndia. Mgbe ndụ nke kpakpando rutere na njedebe, ọ na-enwu ka ukwuu na mpaghara ultraviolet nke ụdị electromagnetic. Igwe redio a nke na-enye ìhè na-enye ìhè gas nke radieshon ionizing chụpụrụ na ya mere a na-emepụta nebula mbara ala.
Agba ndị nwere ike ihu site na ihe dị iche iche dị n'ogologo a kapịrị ọnụ. Ma ọ bụ na atom hydrogen na-ewepụta uhie uhie, ebe atọm oxygen na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Helix Nebula bụ kpakpando ndị na-enyocha mbara igwe amateur na-ese foto ya maka agba ya doro anya na ọ yiri nnukwu anya. Achọpụtara ya na narị afọ nke 18 ma ọ dị ihe dịka 650 afọ ole na ole site na kpakpando Aquarius.
Enwere ike ịsị na nebulae nke ụwa bụ ihe fọdụrụ na kpakpando, na n'oge gara aga, yiri Sun anyị. A na-eme ka oyi akwa ndị a dị ọkụ site na isi ọkụ nke kpakpando nwụrụ anwụ. A na-akpọ nke a dwarf ọcha. Na ihie nke na-eme nwere ike hụrụ na ma anya na infrared wavelengths.
Ntughari uche na umu anwuru
Anyị enweghị ike imecha post a na-ekwughị na e nwere nebulae na-echekwa njirimara abụọ ahụ a kpọtụrụ aha na mbụ. Imirikiti nebulae na-emepụta bụ 90% hydrogen, nke fọdụrụnụ bụ helium, oxygen, nitrogen, na ihe ndị ọzọ. N'aka nke ọzọ, nebulae ntụgharị uche na-achakarị anụnụ anụnụ n'ihi na nke ahụ bụ agba na-agbasa ngwa ngwa.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụwa anyị juputara na ihe ịtụnanya dị ịtụnanya nke nwere ike ịhapụ anyị ikwu okwu. Hụtụla otu nebula? Hapuru anyi okwu gi 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Nebulae
hello ahuru m gị n'anya otu ị siri kọwaa ihe bụ nebulae. Kedụ ka m ga-esi gụọ ihe niile ị dere gbasara ụwa?